Izibuko ezi-4 zabesifazane 2022 ongafuni ukuphuthelwa - THE INDIAN FACE
Empilweni, njengakuma-closets ethu, kukhona uhlu lwezinto ezibalulekile. Lezo lapho ungalindeli ukuthi zikonge esikhathini esingaphezu kwesisodwa ukwenza konke kube lula kancane: Leyo jean, lawo mateki amhlophe, leyo top eyisisekelo futhi, futhi, futhi, izibuko zethu zelanga.
Esihlokweni sethu namuhla sifuna ukukutshela imininingwane ethile mayelana namaqoqo wethu amane amahle kakhulu we izibuko zelanga zabesifazane lokho esinakho The Indian Face kwakho. ISouthern California iboniswe kumamodeli wesimanje, we-avant-garde, amasha nasesitayeleni. 'Soma', 'Lombard', 'Laguna' ne 'Southcal' amagama ala maqoqo amane, aphefumulelwe yizindawo eziyingqayizivele ezakha ugu lwaseCalifornia. Ngaphezu kwalokho, sithole ukuthi akekho umgqugquzeli ongazisebenzisi lezi zinhlobo esikulethele zona, ngakho-ke ungagqugquzeleka ngokunye ukubukeka kwabo ukuphatha lapho usebenzisa lesi sitayela sezibuko.
Izibuko zelanga ezipholile: Southcal Green
Ukufisa ukwehlukana nabasunguliwe, yilokho le modeli yezibuko zelanga idlulisela kithi. Kukhona labo abesaba ukwengeza umbala omncane ekubukekeni, ngoba sifundisiwe ukuthi ukuhlukahluka kwamathoni ombala kusuka kokumnyama kuye kokumpunga, kepha kuyaqabukela ubone okuphakathi. Futhi iqiniso ukuthi kunezinkulungwane zezinketho nezitayela zamahhala ezephula umbono ukunikeza ukubukeka kwakho okungu-360º.
Esethu 'USouthcal Green' Bangabanye izibuko zelanga eziluhlaza okotshani, eziklanyelwe ukuphakamisa noma yisiphi isitayela futhi zikwenze kucace ukuthi i-avant-garde kanye ne-freshness yinto ejwayelekile yosuku. Uhlaka oluhlaza lwamabhodlela namalensi polarKukhulisiwe kwenza le modeli ibe ngenye yezintandokazi kakhulu. I-geometry yalezi zibuko igqamisa isitayela esiyisikwele esidala, esikwenza uzenzele izingilazi zempilo yonke, ngoba lolu hlobo lomklamo aluphelelwa yisitayela futhi nokuthi luzizwa luhle kakhulu kungakhathalekile ukuma kobuso bakho kanye umbala wesikhumba sakho.
Izibuko zelanga ezinobuntu: ILaguna Bi Magent
Uma inhloso yosuku ukuheha ukunakwa hhayi ukunganakwa, sikhuluma ngezibuko zelanga: 'I-Laguna Bi Magenta'. Lezi zibuko zelanga zohlaka lwe-bicolor zabesifazane zikhuthazwe yiLaguna Beach, eCalifornia. Isikhathi ngasinye baba kumele kwabaningi bethu izingubo, ngaphezu kokuklanywa kwabo, benza ukubukeka okuyisisekelo okungabonakala kungaziwa ku- izingubo ngobuntu obuningi ngisho namandla. Ukuhlanganiswa kwamathoni, phakathi kwethambo ne-magenta, kunezela isitayela esithile nokuthambekela ekubukekeni, sengathi kwakwaziwa ukuthi ubumnandi buhlala busethesini njalo.
Futhi ngabe uyazi okungcono kunakho konke? Lowo wabathonya esibathandayo, uMaria Pombo, ungumthandi othembekile wozimele ikati-iso bicolor. Bheka ugqozi lokuthi ungahlanganisa kanjani i-'Laguna Bi magenta 'yakho njenge UMaria Pombo.
Izibuko zelanga zeJiyomethri: Soma Mnyama
Ubuhle, ukuzala nesitayela. Yilezo izichasiso ezihamba phambili zokuchaza lezi zibuko zelanga zabesifazane. Uzimele wayo ulula futhi amalensi akhona polarIphakanyisiwe, ngaphezu kwalokho, ububanzi befreyimu bukuvumela ukuthi uvikele indawo enkulu yamehlo, ebaluleke kakhulu ukuvimbela okuncane ekubukeni kombimbi ngezikhathi ezithile. Bonke abagqugquzeli banamamodeli wezibuko zabo ze-XXL zezingilazi ezinamafremu wejometri, ikakhulukazi lawo izibuko ezimnyama ezimnyama lokho kusikhumbuza kancane isitayela sikaVictoria Beckham, futhi kulokhu, umgqugquzeli Dulceida Uyathanda ukugqoka lolu hlobo lwezibuko zelanga, ngoba luvumelanisa ubuso bakhe kahle futhi luphawula isitayela esiyingqayizivele kusengaphambili.
Ukuthinta imfudumalo ebusweni:Ufudu lweLombard
Umgwaqo odumile waseLombard eSan Francisco, usiholela eqoqweni lethu le-'Lombard Tortoise '. Njenge-'Soma Black ', leli qoqo liphatha uhlaka lwejiyometri lwe-XXL oluthatha indawo yobuso bethu nomaphi lapho siya khona. Yini ekhethekile ngalokhu, ngaphandle kwalokho izibuko zelanga zabesifazane polarkuphakanyisiwe, ngukuthi isihlalo sohlobo lwe-tortoiseshell sinikeza ukuthinteka ekubukekeni, njengokungathi besihlala ehlobo ngaso sonke isikhathi.
Yikuphi ukuthambekela kwezibuko zelanga zabesifazane?
Uhlobo lohlaka oluthwalwayo nolusetha umkhuba yizinhlobo zezibuko ezinamafreyimu amnyama e-Cat-Eye obuso obuncane. Futhi ngobuso obukhulu, izibuko zelanga ze-XXL ezinamafremu wejometri ukuqhubekisela phambili izici zabantu.
Kusho ukuthini ukuthi izibuko zibe 'namalensi Polarkuphakanyisiwe '?
Lokhu kusho ukuthi amalensi ezibuko anesihlungi esivumela kuphela ukukhanya okusebenzisekayo ukudlula, kuvimbela ukudlula kokukhanya okukhanyayo. Lokho wukuthi, kuthuthukisa kakhulu ukucasula kanye nezingozi ezingabangelwa ukukhanya okuvela ezintweni ezibonakalisayo, okusivumela ukuthi sibe nombono ophelele we-panorama, ngeziqholo nemibala yemvelo.
Kuyini ukuvikelwa UV400?
Izibuko zelanga eziza nokuvikelwa UV400 Imvamisa kusho ukuthi amalensi anesihlungi esivikela imisebe ye-UVA ne-UVB, lena kube yimisebe eyingozi kakhulu ethinta iso lomuntu. Igama lesibizo '400' lisho ukuthi, livikela kubude bama-nanometer angama-400.
Iyini intaba yekati?
Uhlaka lwe-'Kat-Eye ', njengoba igama lalo lisho, luhlobo lohlaka olulingisa ukugoqeka kwamehlo ekati, kuphakamisa imbobo yelensi kancane. Izitayela zezingilazi ezinjenge- 'Laguna', kanye ne- 'Pacific' zimele lolu hlobo lwezibuko.
Yiziphi izibuko zelanga ezithandwa kakhulu nguMaria Pombo?
Imodeli yezibuko eziyizintandokazi zomgqugquzeli yizibuko zelanga zesikwele zakudala, kanye nalabo abanohlaka lwe 'Cat - Eye'. Yizinhlobo ezimbili zezingilazi ezigqama kahle kakhulu ngesitayela sazo.
Ngabe hlobo luni lwezibuko ezigqokwa nguDulceida?
Ezincwadini eziningi siyabona ukuthi umuntu oshukumisayo uncika ezimotweni ezinkulu zelanga zejometri, ezihambisana kahle nobuso bakhe zinikeza ukuthinta kwangesikhathi esizayo ekubukekeni kwakhe.
Okuningi kwe: Ithenda